Xog:RW Rooble oo ka hor-yimid kala diristii Rugta Ganacsiga xili warar shegaayo…. | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Xog:RW Rooble oo ka hor-yimid kala diristii Rugta Ganacsiga xili warar shegaayo….
Xog:RW Rooble oo ka hor-yimid kala diristii Rugta Ganacsiga xili warar shegaayo….
Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa muujiyey inuusan raali ka aheyn kala dirista Rugta Ganacsiga Soomaaliya oo horey wasiirka ganacsiga uu sheegay inuu kala diray.
Previous articleXOG: Musharixiin kursi Baarlamaan u sharxan oo Hub iyo Gaadiid dagaal ku diyaarsanaya Dhuusamareeb
Next articleDaawo:Bog facebook ah oo ku xiriirsanaa bogga guddiga doorashada oo lagu aflagaadeeyey Xasan Sheekh
Maxaadan Ogayn Oo Maanta Kasocdo Magaalada Boosaaso……
Siyaasiyiin miisan culus oo magaalada Dhuusamareeb ku wajahan + Ujeedka
Maxaad ka ogtahay Guddiga Maanta loo Magacaabayo Khilaafka DF & Maamulada?
Ciidamada tigreyga oo gantaalo aan laga fileyn ku garaacay caasimada Eritrea